Umbhobho wesikwere ligama lombhobho wesikwere kunye nombhobho wexande, oko kukuthi, umbhobho wentsimbi kunye nobude obulinganayo kunye nokungalingani. Yenziwe ngentsimbi yentsimbi eqengqelekayo emva konyango lwenkqubo. Ngokuqhelekileyo, intsimbi ye-strip ikhutshwe, ihlanjululwe, igxininiswe kwaye ifakwe kwi-welded ukuze yenze umbhobho ojikelezayo, emva koko ifakwe kumbhobho wesikwere, kwaye inqunyulwe ubude obufunekayo.
Umbhobho wesquare odibeneyo uhlukaniswe
1. Ngokwenkqubo - i-arc welding square tube, ukumelana ne-welding square tube (i-frequency ephezulu kunye ne-frequency ephantsi), i-gas welding square tube kunye ne-furnace welding square tube.
2. Ngokwe-weld - i-welded square pipe kunye ne-spiral welded square pipe.
Iityhubhu zesikwere zohlulwe zibe ziityhubhu zesikwere zentsimbi eziqhelekileyo kunye neetyhubhu zesikwere sealloy ephantsi ngokwezinto eziphathekayo.
1. Intsimbi ye-carbon eqhelekileyo yahlulwe kwi-Q195, Q215, Q235, SS400, 20 # intsimbi, i-45 # intsimbi, njl.
2. Iintsimbi ze-alloy eziphantsi zihlulwe zibe yi-Q345, 16Mn, Q390, St52-3, njl.
Ukuhlelwa komgangatho wemveliso
Iityhubhu zesikwere zahlulwe ngokwemigangatho yesizwe yesikwere iityhubhu, iityhubhu zesikwere ezisemgangathweni zaseBritani, iityhubhu zesikwere ezisemgangathweni zaseMelika, iityhubhu zesikwere ezisemgangathweni zaseYurophu kunye neetyhubhu zesikwere ezingengomgangatho ngokwemigangatho yemveliso.
Ukuhlelwa kwemilo yecandelo
Imibhobho yesikwere ihlelwa ngokwemilo yecandelo:
1. I-tube yesikwere yecandelo elilula: ityhubhu yesikwere, i-rectangular square tube.
2. Ityhubhu yesikwere enecandelo elintsonkothileyo: ityhubhu yesikwere emile okwentyatyambo, ityhubhu yesikwere evulekileyo, ityhubhu yesikwere enethati kunye netyhubhu yesikwere esinemilo ekhethekileyo.
Ukuhlelwa konyango olungaphezulu
Imibhobho yesikwere yahlulwe yaba yimibhobho yesikwere eshushu-diphu, imibhobho eskweri eyenziwe nge-electro galvanized, imibhobho yesikwere eneoyile kunye nemibhobho ephindwe kabini ngokwendlela yonyango lomphezulu.
Iityhubhu zesikwere zihlelwa ngokwenjongo: iityhubhu zesikwere zokuhombisa, iityhubhu zesikwere zesixhobo somatshini, iityhubhu zesikwere kushishino lomatshini, iityhubhu zesikwere kushishino lweekhemikhali, iityhubhu zesikwere sokwakhiwa kwentsimbi, iityhubhu zesikwere sokwakha inqanawa, iityhubhu zesikwere semoto, iityhubhu zesikwere zemoto. iintsimbi zentsimbi kunye neentsika, kunye neetyhubhu zesikwere ngeenjongo ezikhethekileyo.
Ulwahlulo lokutyeba kweendonga
Iityhubhu eziluxande zihlelwa ngokobunzima bodonga: iityhubhu ezishinyeneyo ezityebileyo eziluxande, iityhubhu ezishinyeneyo ezinoxande kunye neetyhubhu ezinodonga olucekethekileyo.
I-GB / t6728-2002, GB / t6725-2002, gbt3094-2000, JG 178-2005, ASTM A500, JIS g3466, en10210 okanye isivumelwano sobugcisa.
I-GB / t3094-2000 (umgangatho wesizwe) umbhobho ocinezelekileyo onemilo ekhethekileyo yoxande
I-GB / t6728-2002 (umgangatho wesizwe) obandayo owenziwe intsimbi yecandelo elingenanto kwisakhiwo
I-ASTM A500 (iMgangatho waseMelika) i-carbon steel Cold-Formed Welded welded rectangular tubes kunye neetyhubhu eziluxande ezingenamthungo ezinamacandelo angqukuva namilise okwezodwa.
En10219-1-2006 (umgangatho waseYurophu) ukubanda kwakhiwe okudityanisiweyo okuqinileyo kumacandelo olwakhiwo olungelulo kunye neenkozo ezicolekileyo.
I-JIS g 3466 (umgangatho waseJapan) umbhobho we-angular uxande wokwakhiwa ngokubanzi